Xoogaga Shabaab oo sheegtay in ka badan 40 Askari oo Itoobiyaan ah inay ku dileen dagaalka Halgan | Baydhabo Online
Xoogaga Shabaab oo sheegtay in ka badan 40 Askari oo Itoobiyaan ah inay ku dileen dagaalka Halgan
Ururka Al Shabaab ayaa sheegtay inay dileen 43 Askari oo ka tirsan ciidamada Itoobiya, sida lagu sheegay war ka soo baxay Shabaabka oo laga baahiyay Idaacada Andalus ee afka Al Shabaab ku hadasha.
Shabaabka waxa ay sheegeen Khasaaraha ugu badan ee dagaalka ciidamada Itoobiya inuu ka soo gaaray weerarka Ismiidaaminta ah oo uu fuliyay ruux kaxeynaayay gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay, kaasi oo lagu dhuftay Irida Saldhiga ciidamada Itoobiya ee Degmada Halgan.
Waxa ay sheegeen in ka badan 10 Askari halkaasi inay ku nafwaayeen, kadibna ay xigtay dagaal fool ka fool ah oo ciidamada Shabaabka ay ku galeen Saldhiga ciidamada Itoobiya.
Al Shabaab ayaa ku faanay ciidamada Itoobiya inay ku dhex toogteen gudaha Xerada, kadib markii qal qal xoogan oo soo foodsaaray ciidanka oo ay ku qal qaleen Ismiidaaminta albaabka lagu furtay.
Warka ka soo baxay Shabaabka ayaa sidoo kale lagu sheegay ciidamada Shabaab inay saanado Millateri ka daldasheen Saldhiga ciidamada Itoobiya ee Degmada Halgan, kadib markii ciidamada Itoobiya hal meel ay isugu uruureen oo ay ka dagaalamen.
Xoogaga Shabaab ayaa sidoo kale sheegtay inaysan jirin ciidan gurmad ah oo u soo dhaqaaqay ciidamada Itoobiyaanka ah ee Degmada Halgan ay ku weerareen.
Ka sokoow hadalka ka soo baxay Shabaabka ma jirto ilo wareedyo madax banaan oo xaqiijinaya sida ay wax u dhaceen, waxaana wararka ay intaasi ku darayaan in Degmada Halgan weli ay ka dhaceyso rasaasta ay isweydaarsanayaan ciidamada Shabaabka iyo kuwa Itoobiya.
Dagaalka Shabaabka ay ku qaaden Saldhiga ciidamada Itoobiya ee Degmada Halgan, ayaa u qaab eeg kii ciidamada Burundi lagu laayay ee Deegaanka Leego Gobolka Shabellaha hoose.